Tahriibayaal ku geeriyooday marin biyoodka u dhaxeeya Ingiriiska iyo Faransiiska -
HomeWararkaTahriibayaal ku geeriyooday marin biyoodka u dhaxeeya Ingiriiska iyo Faransiiska
November 24, 2021 F.G Wararka 0
Ku Dhawaad 31 qof oo tahriibayaal ah oo ku sii jeeday dalka Ingiriiska ayaa ku dhintay English Channel oo ah marin biyood u dhaxeeya dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska una dhow magaalada Calais ka dib markii ay la degtay doonidii ay la socdeen dadkaasi.
R/wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay inuu aad uga naxay waxa dhacay, isaga oo intaa ku daray in UK ay sameyn doonto tallaaba kasta si wax looga qabto kooxaha dadka tahriibiya.Waxaana lagu wadaa inuu guddoomiyo kulan degdeg ah oo arrintaan looga hadlayo.
Mr Johnson waxa uu sheegay in dhimashadu ay tahay “musiibo”, isaga oo intaa ku daray inay muhiim tahay in la jabiyo dadka ka ganacsada rahriibinta dadka, kuwaas oo uu sheegay in ay si dhab ah uga baxsanayaan dilka.Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto sidii loo joojin lahaa dambiilayaasha abaabulan.
R/ Wasaaraha ayaa yiri: “Waxaa muhiim ah in aan hadda sare u qaadno dadaalkeenna aan ku jebineyno qaabka ganacsi ee burcadda sidaan dadka ugu diraya badda.”Mr Johnson ayaa qiray in dadaallada ilaa hadda lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta isticmaalaya doomaha yar yar uu yahay mid aan ku filneyn.
R/wasaaraha Faransiiska Jean Castex ayaa sheegay in doonida degtay ay ahayd “musiibo” dadka dhintayna ay dhibanayaal u yihiin “dambiileyaal wax tahriibiya”.”Waxaan la dareemayaa xanuunka kuwa badan oo maqan iyo kuwa dhaawacmay, oo ay dhibaateeyeen mukhalasiinta dambiilayaasha ah ee ka faa’iidaysta dhibtooda iyo dhaawacyadooda,” ayuu yiri Jean Castex.
Jean-Marc Puissesseau, oo ah guddoomiyaha dekedaha Calais iyo Boulogne, ayaa BBC-da u sheegay in 50 qof ay saarnaayeen doonta, ilaa “shan ama lix” qofna la helay ilaa iyo hadda. Tiro dad ah ayaa la rumeysan yahay inay doonyo yar yar ku gaareen UK Arbacadii maanta.Wariye ka tirsan BBC-da ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda 25 doomood ay isku dayeen inay u gudbaan dhanka Uk saacadihii maanta.
Arrintaan ayaa imaanaysa iyadoo ay jiraan tiro badan oo muhaajiriin ah oo ka gudbaya Faransiiska kuna sii jeeda dalka Ingiriiska . In ka badan 25,700 oo qof ayaa doomo yar yar ku tagay UK,kuwaas oo ka badan marka la barbar dhigo sanadkii hore.
Marinka Dover ayaa ah marinka ugu mashquulka badan caalamka waxaana uu galaafatay nolosha dad badan oo isku dayayay in ay uga sii gudbaan dalka Ingisriiska iyagoo wata doomo la buufiyay.Waxaa loo maleynayaa in ugu yaraan 10 qof oo kale ay dhinteen dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay iyagoo isku dayaya inay halkaa ka gudbaan.